Bollywood: Is barbardhigga Mithun Chakraborty iyo wiilkiisa oo filim cusub soo saaraya - BBC News Somali
Bollywood: Is barbardhigga Mithun Chakraborty iyo wiilkiisa oo filim cusub soo saaraya
Xigashada Sawirka, Namashi Chakraborty
Mithum, waagii uu yaraa iyo wiilkiisa Namashi Chakraborty
Wiilka ugu yar ee uu dhalay Mithum ee lagu magacaabo Namashi Chakraborty ayaa qeyb ka ah filimka weli la jilayo ee "Bad Boy". Waxay dadka billaabeen in ay ka hadlaan sida uu ugu egyahay aabihii oo xidig dhanka aflaanta ahaa 1980-meeyadii.
Sida lagu qoray wargeyska Hindustan Times, Namashi wuxuu sheegay in uu diyaar u yahay in aabihii "la barbardhigo. Is barbardhigga waa sharaf wayn".
"Dadka waxay ila mid dhigi doonaan qof muddo tobannaan sano ah ku soo jiray jilidda aflaanta. Waa qof la xushmeeyo," ayuu yiri.
"Haddii dadka ay xirfadda iyo shaqadii aabahey ila barbardhigaan, taasi waa dhibaato. Sababtoo ah, waxaad raadineysaa qaab kale oo Mithun Chakraborty ah, taas oo aan suuragal ahayn. Waa jilaa iga duwan oo xilli kale soo shaqeeyay", ayuu yiri wiilkan uu dhalay atoorihii caanka ahaa ee Soomaalida qaar ay u garanayaan Been-boode.
Mithum wuxuu ka mid yahay xidigii ugu caansanaa Bollywood, sannadhihii 1980-maadkii iyo bilowgii 1990-meeyadii. Aflaantiisa waxay u badan yihiin dagaal iyo kuwa jaceyl ah.
Wiilkiisa ugu yar, wuxuu ku barbaaray isagoo daawanaya sida uu aabihii u dagaallamo iyo qaabka uu heeshaha ugu ciyaaro ee u gaarka ahaa.
"Waan arkay dhammaan filimadiisa. Markasta waan jeclaa in aabahay aan ka daawado shaashadaha waaweyn. Waa jilaaga aan ugu jeclahay. Marka wax badan waan iska dhigay sidiisa oo kale. Hab dhaqankiisa iyo sida uu jirkiisa u dhaqaajiyo, sababtoo ah waa aabahay. Marka inaan sidiisa u dhaqmo waa wax dhiigeyga ku jira," ayuu yiri Namashi, sida lagu qoray India TV News.
Hal qoys oo ku dhawaad hal qarni heysta Bollywoodka Hindiya
Atariisho caan ah "oo ku ceebowday arrin ay ka sheegtay Dagaalkii Labaad ee Adduunka"
Wuxuu ka mid yahay jilaayada da'da yar ee dhowaan ku soo biiray Bollywood. Wuxuu sheegay: "jilaa kasta wuxuu leeyahay garasho u gaar ah. Fashilkana ma ahan qalad ka dhacay jilaaga ama filim soo saaraha".
"Ma u maleynayo in ay jiraan jilaayo fiican ama xun. Waxaa jiro kuwo la qaato iyo kuwa la diido. Marka waxay ila tahay in aad raacdo maskaxdaada, garashadaada iyo in aad sida ugu wanaagsan u jisho".
Xigashada Sawirka, Times India
Filimka uu jilayo ee 'bad boy' waa mid jaceyl iyo shactiro isugu jira.
Jilaaga caanka ah, Salman Khan ayaa markii ugu horeysay baahiyay in filimkan uu jilayo wiilka Mithum uu ku dhow yahay dhammaad.
Balse filimkiisan wuxuu ka mid yahay aflaanta uu saameyay cudurka coronavirus ee la hakiyay, waxaana la filayaa in dhowaan dib loo billaabo si loo dhameystiro.
"Cudurka aawadii, wax kasta way hakadeen. Balse waxaa jiro xaalado dhib badan, waaxan rajeyneynaa in dadka oo dhan ay badbaadaan. Waxaan dooneynaa in filimka uu soo baxo ka dib marka xaaladda ay caadi noqoto", ayuu sheegay.
Rishi Kapoor: Jilaaga caanka ah ee jaceylka oo dhintay
30 Abriil 2020
15 Luulyo 2020
Bollywood: Maxaa kala heysta coronavirus iyo jilayaasha filimada ee Hindiya?
Armaajada ‘Dharka Bollywood-ka’ ee Justin Trudeau
1 Maarso 2018
Bollywood iyo fayraska corona: Sida uu cudurka u saameeyay qoysaska jilaayaal caan ah